Kooxaha Manchester United iyo Tottenham Hotspur oo ku dagaalamaya xidig ka tirsan Barcelona – Gool FM
(England) 16 Maajo 2019. Wargeyska “The Sun” ee dalka England oo xiganaya kan reer Spain ee “Marca” ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in kooxaha Manchester United iyo Tottenham ay wada xiiseenayaan saxiixa xidiga kooxda Barcelona ee Nélson Semedo.
Kooxaha reer England ayaa waxay doonayaan inay ka faa’ideystaan, maadaama uusan Nélson Semedo boos joogta ah ka heysan safka kooxda Barcelona, sababa la xiriira in tababare Ernesto Valverde uu inta badan ka door bido Sergi Roberto.
Sida laga soo xigtay wargeyska “Marca” Nélson Semedo ayaa haatan lagu heli karaa aduun lacageed dhan 30 milyan ginni.
Kooxda Manchester United ayaa rajeyneysa inay lasoo saxiixato daafaca garabka midig ee reer Portugal, kaddib marka uu kooxda ka tago Antonio Valencia, isla markaana uu hoos u dhac ku yimid qaab ciyaareedka Ashley Young xilli ciyaareedkan.
Si la mid ah kooxda Tottenham Hotspur ayaa waxay rajeeneysaa inay u dhaqaaqdo heshiiska Nélson Semedo, maadaama la filayo in uu kooxda ka dhaqaaqo Serge Aurier.
Semedo oo 25 jir ah ayaan kasoo muuqan xili ciyaareedkan kulamada kooxda Barcelona marka laga reebo 42%, wuxuuna inta badan ku imaan jiray qaab badal ah.
“Waa inaan ixtiraamnaa go'aanka Eden Hazard” - David Luiz